Wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa Garowe ku qabatay shir looga doodayo cutubka sagaalaad ee dastuur KMG ah ee Soomaaliya kaasi oo ka hadlaya awoodda garsoorka dalka. – Wasaaradda cadaaladda Puntland
Wasaaradda cadaaladda, Arimaha Diinta, Dastuurka iyo dhaqan celinta Puntland ayaa Garowe ku qabatay shir looga doodayo cutubka sagaalaad ee dastuur KMG ah ee Soomaaliya kaasi oo ka hadlaya awoodda garsoorka dalka.
Kulanka oo ay ujeedadiisu ahayd ka dooodista iyo kala tashiga dadwaynaha ku nool Magaalada Garoowe ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiir-dawlaha Wasaaradda cadaaladda, Arimaha Diinta, Dastuurka iyo dhaqan celinta Puntland, kusimaha Agaasimaha guud ee Wasaardda , Agaasimaha Waaxda Dastuurka ee Wasaaradda, lataliyaha Madaxwaynaha Arimaha sharciga, xubno kasocda dawladda , dhalinyaro , sharciyaqaano , aqoon yahano , culimada iyo ururada Bulshada.
Mudada uu socdo kulankaan ayaa aad looga doodi doonaa dib u eegista cutubka Sagaalaad oo ka hadlaya awoodsiinta garsoorka iyo qaab dhismeedka Maxkamadaha heer Fadaraal iyo heer Dawladaha xubnaha ka ah Dawladda Fadaraalka.
Waxaa ugu horayn kulanka ka jeediyay kalmad faahfaahinaysa ujeedada kulanka kusimaha Agaasimaha Mudane Ismaaciil Xaaji Cabdi oo kula dardaarmay kaqayb galayaasha kulanka in ay si mas’uuliyadi ku-jirto uga doodaan talana ka dhiibtaan Cutubka Horyaala.
Waxaa sidoo kale kalmado kooban ka jeediyay lataliyaha Sharciga Madaxwaynaha oo faah faahin ka baxshay Cutubkaan iyo waxa uu xambaarsanyahay , sdioo kale waxa uu sheegay in Dawladda Puntland ay ka go’antahay in marwalba ay taageerayso difaacaysana sida ay danta dadka Puntland ugu jirto.
Ugu dambayntii waxaa si rasmi ah kulanka u furay Wasiir Dawlaha Wasaaradda Maxamed Cabdi Ilyaas isaga oo sheegay in hadafka kulankaan uu yahay in lagu soo bandhigo aragtida Puntland, waxa uu sidoo kale sheegay in Puntland ay marwalba u taagan tahay sidii lagu heli-lahaa Nidaam fadaraal oo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay xaqooda ku heli karaan.
Posted on 14th July 2019 Author
Posted on 8th September 2019 21st October 2019 Author admin